ဒေါသထှကျခွငျးကို ထိနျးခြုပျနိုငျမယျ့ နညျးလမျး (၁၀) ခု
HomeKnowledgeဒေါသထှကျခွငျးကို ထိနျးခြုပျနိုငျမယျ့ နညျးလမျး (၁၀) ခု
ဒေါသထှကျတယျ ဆိုတာ လူတှရေဲ့သဘာဝပါပဲ။ ဒေါသ ဆိုတာ အတှငျးစိတျရဲ့ ရောငျပွနျဟပျမှုပါ။ ဒေါသက တဈခါတလမှော ကောငျးတဲ့အရာတှေ ဖွဈလာဖို့ ဖိအားပေးပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဒေါသကို မထိနျးခြုပျနိုငျရငျ ဆှမြေိုး၊ လုပျဖျောကိုငျဖကျ၊ သူငယျခငျြး၊ ပွငျပလောကနဲ့ ပွဿနာ ဖွဈနိုငျပါတယျ။
1. ဒေါသဖွဈရတဲ့ အကွောငျးအရငျးကို စာရှကျပျေါ ခရြေးပွီး ဒေါသကို ဖွဖြေောကျပါ၊
ဒေါသဖွဈရတဲ့ အကွောငျးအရငျးကို ရှငျးရှငျးလငျးလငျး သိဖို့ လိုပါတယျ။ အဲဒါကွောငျ့ စာရှကျပျေါမှာ ခရြေးခွငျးက အသုံးဝငျပါတယျ။ ဒေါသဖွဈရတဲ့ အကွောငျးအရငျးကို အသေးစိတျ တဈခကျြခငျြး သိလာရတဲ့ အခါ ခန်ဓာကိုယျက တငျးအားတှေ လြောကသြှားပါတယျ။ ပွီးတော့ လှတျလှတျလပျလပျသာ တှေးပဈလိုကျပါ။ ရေးထားတဲ့ အကွောငျးအရငျးတှေ နညျးလာလလေေ စိတျငွိမျးခမျြးလာလလေေ ပါပဲ။
2. ရငျးနှီးတဲ့ တဈယောကျယောကျကို ဖကျထားလိုကျပါ။
ဒေါသထှကျနတေဲ့ အခြိနျမှာ တဈယောကျယောကျကို ရငျးရငျးနှီးနှီး ဖကျလိုကျခွငျးက ပြျောရှငျပွီး အားရကနြေပျ စပေါတယျ။
3. ပီကေ ဝါးပါ။
ပီကဝေါးခွငျးက အနီးအနားက လူတှအေပျေါ ရနျလိုမှုကို လြော့နညျးစပေါတယျ။ မေးရိုးတှေ လှုပျရှားနရေတဲ့အခါ မကျြနှာနဲ့ ခန်ဓာကိုယျမှာ ရှိတဲ့ ကွှကျသားတငျးမာမှုတှေ နညျးသှားပါတယျ။ အဲဒါကွောငျ့ ပီကဆေောငျ ထားပါနျော။
4. လမျးလြှောကျခွငျး သို့မဟုတျ ပွေးခွငျး
ဒေါသတှေ ထှကျလာပွီဆိုရငျ မိနဈ 20 လောကျ လမျးလြှောကျလိုကျပါ ။ အဲဒီအခါ ဦးနှောကျက ပြျောရှငျမှု ဟျောမုနျးကို ထုတျပေးပါတယျ။ ပြျောရှငျမှု ဟျောမုနျး ထှကျလာပွီးနောကျမှာ ဒေါသတှေ၊ စိတျအလိုမကမြှုတှေ ပြောကျသှားပါတယျ။
5. အကွိုကျဆုံး သီခငျြးကို ဆိုလိုကျပါ။
သီခငျြးဆိုခွငျးက စိတျညဈစရာတှေ၊ ဒေါသထှကျစရာတှကေို လြှော့ခပြေးပါတယျ။ ဒေါသထှကျလာပွီ ဆိုရငျ လူတှနေဲ့ဝေးတဲ့ တဈနရောကို တဈယောကျတညျး သှားပွီးသီခငျြးတှေ အျောဆိုလိုကျပါ။ သီခငျြးဆိုရငျးနဲ့ ပြျောလာပါလိမျ့မယျ။ စိတျညဈစရာတှလေညျး ထှကျပွေးသှားပါလိမျ့မယျ။
6. ကြှပျဆတျတဲ့ စားစရာတှကေို ဝါးစားလိုကျပါ။
ဒေါသကလညျး ထှကျနတေယျ၊ အစားကလဲ အမြားကွီးမစားခငျြဘူး ဆိုရငျ မုနျ့ကွှပျ ဒါမှမဟုတျ ကြှပျဆတျတဲ့ တဈခုခုကို ဝါးစားလိုကျပါ။ လူတှကေ တကြှတျကြှတျဝါးသံကို ကွားရရငျ စိတျတှပွေလြေော့ တတျပါတယျ။
7. လကျဖြောကျ တီးပါ။
ဒေါသတှထှေကျပွီး နှလုံးတအားတုနျလာရငျ လကျဖြောကျ တီးလိုကျပါ။ လကျဖြောကျတီးတဲ့ အသံကို စိတျကို ရှငျလနျးစေ ပါတယျ။ လကျမမှာ သှေးခုနျနှုနျးရှိပါတယျ။ လကျဖြောကျတီးခွငျးဖွငျ့ သှေးခုနျနှူနျးကို ငွိမျစပွေီး နှလုံးခုနျမွနျနခွေငျးကို နှေးသှားစေ ပါတယျ။
8. အိမျအလုပျတှေ လုပျလိုကျပါ။
ဒီနညျးက အတျော အကြိုးရှိပါတယျ။ ဘာမှမတှေးတော့ပဲ အိမျအလုပျ လုပျခွငျးက စိတျငွိမျစပေါတယျ။ အပငျစိုကျခွငျး၊ ခှေး၊ ကွောငျတှနေဲ့ဆော့ခွငျး၊ အဝတျရှငျးခွငျးတှကေ သငျ့ရဲ့စိတျတှကေို တညျငွိမျစပေါတယျ။
9. အပငျတဈပငျနားမှာ ရပျနပေါ။
အပငျတဈပငျနားမှာ 10 မိနဈခနျ့ ရပျနခွေငျးက ဦးနှောကျအတှကျ လိုအပျတဲ့ အောကျဆီဂငျြကို ပိုရစပေါတယျ။ အပငျတှရေဲ့ စိမျးလနျးမှုကွောငျ့ သငျ့အတှေးတှကေ ပိုပွီးရှငျးလငျးလာ ပါလိမျ့မယျ။ ဒေါသတှလေညျး ထှကျပွေးသှား ပါလိမျ့မယျ။ စံပယျပနျးရနံ့ ဒါမှမဟုတျ လာဗငျဒါပနျးရနံ့က စိတျကို ကွညျလငျစပွေီး နှဈခွိုကျစှာ အိပျပြျောစပေါတယျ။
10. သငျဒေါသထှကျမှု အခြိနျကို ရတှေကျပါ။
ဒေါသကို အမွနျဆုံး လြှော့နိုငျမယျ့ နညျးလမျးကတော့ အခြိနျကို ရတှေကျခွငျးပါပဲ။ ဒေါသထှကျတဲ့ အခြိနျက သိပျကွာသှားပါလား ဆိုပွီး သတိထားမိ လာပါလိမျ့မယျ။ အခြိနျကိုလညျး နှမွောမိ လာပါလိမျ့မယျ။ ဖုနျးထဲက နာရီကိုဖွဈဖွဈ အပွငျက နာရီဖွဈဖွဈ ကွညျ့နပွေီး ဒေါသတှကေို လြှော့ခလြိုကျပါ။
ဒေါသထွက်ခြင်းကို ထိန်းချုပ်နိုင်မယ့် နည်းလမ်း (၁၀) ခု
ဒေါသထွက်တယ် ဆိုတာ လူတွေရဲ့သဘာဝပါပဲ။ ဒေါသဆိုတာ အတွင်းစိတ်ရဲ့ ရောင်ပြန်ဟပ်မှုပါ။ ဒေါသက တစ်ခါတလေမှာ ကောင်းတဲ့အရာတွေ ဖြစ်လာဖို့ ဖိအားပေးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒေါသကို မထိန်းချုပ်နိုင်ရင် ဆွေမျိုး၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်၊ သူငယ်ချင်း၊ ပြင်ပလောကနဲ့ ပြဿနာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
1. ဒေါသဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်းအရင်းကို စာရွက်ပေါ် ချရေးပြီး ဒေါသကို ဖြေဖျောက်ပါ၊
ဒေါသဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်းအရင်းကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိဖို့ လိုပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် စာရွက်ပေါ်မှာ ချရေးခြင်းက အသုံးဝင်ပါတယ်။ ဒေါသဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်းအရင်းကို အသေးစိတ် တစ်ချက်ချင်း သိလာရတဲ့ အခါ ခန္ဓာကိုယ်က တင်းအားတွေ လျောကျသွားပါတယ်။ ပြီးတော့ လွတ်လွတ်လပ်လပ်သာ တွေးပစ်လိုက်ပါ။ ရေးထားတဲ့ အကြောင်းအရင်းတွေ နည်းလာလေလေ စိတ်ငြိမ်းချမ်းလာလေလေ ပါပဲ။
2. ရင်းနှီးတဲ့ တစ်ယောက်ယောက်ကို ဖက်ထားလိုက်ပါ။
ဒေါသထွက်နေတဲ့ အချိန်မှာ တစ်ယောက်ယောက်ကို ရင်းရင်းနှီးနှီး ဖက်လိုက်ခြင်းက ပျော်ရွှင်ပြီး အားရကျေနပ် စေပါတယ်။
3. ပီကေ ဝါးပါ။
ပီကေဝါးခြင်းက အနီးအနားက လူတွေအပေါ် ရန်လိုမှုကို လျော့နည်းစေပါတယ်။ မေးရိုးတွေ လှုပ်ရှားနေရတဲ့အခါ မျက်နှာနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်မှာ ရှိတဲ့ ကြွက်သားတင်းမာမှုတွေ နည်းသွားပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ပီကေဆောင် ထားပါနော်။
4. လမ်းလျှောက်ခြင်း သို့မဟုတ် ပြေးခြင်း
ဒေါသတွေ ထွက်လာပြီဆိုရင် မိနစ် 20 လောက် လမ်းလျှောက်လိုက်ပါ ။ အဲဒီအခါ ဦးနှောက်က ပျော်ရွှင်မှု ဟော်မုန်းကို ထုတ်ပေးပါတယ်။ ပျော်ရွှင်မှု ဟော်မုန်း ထွက်လာပြီးနောက်မှာ ဒေါသတွေ၊ စိတ်အလိုမကျမှုတွေ ပျောက်သွားပါတယ်။
5. အကြိုက်ဆုံး သီချင်းကို ဆိုလိုက်ပါ။
သီချင်းဆိုခြင်းက စိတ်ညစ်စရာတွေ၊ ဒေါသထွက်စရာတွေကို လျှော့ချပေးပါတယ်။ ဒေါသထွက်လာပြီ ဆိုရင် လူတွေနဲ့ဝေးတဲ့ တစ်နေရာကို တစ်ယောက်တည်း သွားပြီးသီချင်းတွေ အော်ဆိုလိုက်ပါ။ သီချင်းဆိုရင်းနဲ့ ပျော်လာပါလိမ့်မယ်။ စိတ်ညစ်စရာတွေလည်း ထွက်ပြေးသွားပါလိမ့်မယ်။
6. ကျွပ်ဆတ်တဲ့ စားစရာတွေကို ဝါးစားလိုက်ပါ။
ဒေါသကလည်း ထွက်နေတယ်၊ အစားကလဲ အများကြီးမစားချင်ဘူး ဆိုရင် မုန့်ကြွပ် ဒါမှမဟုတ် ကျွပ်ဆတ်တဲ့ တစ်ခုခုကို ဝါးစားလိုက်ပါ။ လူတွေက တကျွတ်ကျွတ်ဝါးသံကို ကြားရရင် စိတ်တွေပြေလျော့ တတ်ပါတယ်။
7. လက်ဖျောက် တီးပါ။
ဒေါသတွေထွက်ပြီး နှလုံးတအားတုန်လာရင် လက်ဖျောက် တီးလိုက်ပါ။ လက်ဖျောက်တီးတဲ့ အသံကို စိတ်ကို ရွှင်လန်းစေ ပါတယ်။ လက်မမှာ သွေးခုန်နှုန်းရှိပါတယ်။ လက်ဖျောက်တီးခြင်းဖြင့် သွေးခုန်နှူန်းကို ငြိမ်စေပြီး နှလုံးခုန်မြန်နေခြင်းကို နှေးသွားစေ ပါတယ်။
8. အိမ်အလုပ်တွေ လုပ်လိုက်ပါ။
ဒီနည်းက အတော် အကျိုးရှိပါတယ်။ ဘာမှမတွေးတော့ပဲ အိမ်အလုပ် လုပ်ခြင်းက စိတ်ငြိမ်စေပါတယ်။ အပင်စိုက်ခြင်း၊ ခွေး၊ ကြောင်တွေနဲ့ဆော့ခြင်း၊ အဝတ်ရှင်းခြင်းတွေက သင့်ရဲ့စိတ်တွေကို တည်ငြိမ်စေပါတယ်။
9. အပင်တစ်ပင်နားမှာ ရပ်နေပါ။
အပင်တစ်ပင်နားမှာ 10 မိနစ်ခန့် ရပ်နေခြင်းက ဦးနှောက်အတွက် လိုအပ်တဲ့ အောက်ဆီဂျင်ကို ပိုရစေပါတယ်။ အပင်တွေရဲ့ စိမ်းလန်းမှုကြောင့် သင့်အတွေးတွေက ပိုပြီးရှင်းလင်းလာ ပါလိမ့်မယ်။ ဒေါသတွေလည်း ထွက်ပြေးသွား ပါလိမ့်မယ်။ စံပယ်ပန်းရနံ့ ဒါမှမဟုတ် လာဗင်ဒါပန်းရနံ့က စိတ်ကို ကြည်လင်စေပြီး နှစ်ခြိုက်စွာ အိပ်ပျော်စေပါတယ်။
10. သင်ဒေါသထွက်မှု အချိန်ကို ရေတွက်ပါ။
ဒေါသကို အမြန်ဆုံး လျှော့နိုင်မယ့် နည်းလမ်းကတော့ အချိန်ကို ရေတွက်ခြင်းပါပဲ။ ဒေါသထွက်တဲ့ အချိန်က သိပ်ကြာသွားပါလား ဆိုပြီး သတိထားမိ လာပါလိမ့်မယ်။ အချိန်ကိုလည်း နှမြောမိ လာပါလိမ့်မယ်။ ဖုန်းထဲက နာရီကိုဖြစ်ဖြစ် အပြင်က နာရီဖြစ်ဖြစ် ကြည့်နေပြီး ဒေါသတွေကို လျှော့ချလိုက်ပါ။